अमेरिकामा ग्यास स्टेसन कसरि खोल्ने? कति लगानी चाहिन्छ अनि अरु बुझ्नु पर्ने कुराहरु -
Visitor is reading अमेरिकामा ग्यास स्टेसन कसरि खोल्ने? कति लगानी चाहिन्छ अनि अर
Visitor is reading flight to Nepal for Dashain
Visitor is reading Classifieds Summary: Jobs in IL,NY, Room/Apt in MA,NY
Visitor is reading HARISH MATHEMA and KOSHI on ANA (Sunday, July 2)
Visitor is reading भूकम्पले चर्च भत्कदा प्रार्थना गरिरहेकाहरु ' नारायण, नारायण
Visitor is reading News Update from Nepal May 28th
Visitor is reading TPS RELATED HAI
[VIEWED 21060 TIMES]
Posted on 10-09-17 11:41 AM Reply [Subscribe]
"समय - सन्दर्भ" #ग्यास_स्टेशन_ब्यबसाय
सानुबाबु सिलवाल, Sanu Babu Silwal
…बढीमा ३-४ वटा झोला र खल्तीमा लगभग ५-७ सय डलरको ट्राभल चेक वा डलर बोकेर समुन्नत र समृद्धि जीवनगाथाको सपना बोकेर अवसरको मुलुक अमेरिका भित्रिएका सयौं नेपालीहरू अमेरिकी आर्थिक स्वतन्त्रता र अवसरको सदुपयोग गर्दै थुप्रै ब्यवसाय गरी सम्पन्नतातर्फ लम्किइरकेका छन् भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, अब पत्याए हुन्छ । अहिले अमेरिकामा थुप्रै नेपालीहरू साना ब्यवसायको मालिक बनिरहेका छन् । र, बन्ने क्रम जारी छ । पहुँच, अनुभव र आँटले सयौं नेपालीहरू अमेरिकी जीवनशैलीको एक महत्वपूर्ण पर्याय ग्यास स्टेशन र स्टोरको मालिक बनिरहेका छन् । यसरी नेपालीहरूले अमेरिकामा आर्थिक प्रगति र सफलता चुमिरहेका मात्र छैनन्, अमेरिकी राजश्व संकलन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक लगानी गरी अमेरिकी अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण सहयोगी बनिरहेका छन् ।
ठूलो छाती, सकारात्मक विचारधारा र संयमताले ब्यवसायलाई टेवा पुर्याउँछ । एक दिन ब्यापार नहुँदा वा कम हुँदा आत्तिने, मलिन हुने र अर्को दिन ब्यापार राम्रो हुँदा निकै खुसी हुने असंयमताले यो ब्यवसायमा टेवा पुर्याउँदैन । लेखा, कर दाखिला, सरकारी नीति नियमको पालना र समयमै दर्ता, नवीकरण र पालना अर्को महत्वपूर्ण चुनौती र आवश्यकता हो । हरेक विहान उठ्दा, नयाँ चिन्तन, नयाँ आइडिया, नयाँ शैलि र थप सिर्जनशील सोचका साथ उठ्न जरुरी छ । कलात्मक र प्रगतिशील सोचाइले ग्यास स्टेशन तथा स्टोरलाई नयाँ प्रगति र सफलताको मोडतिर उन्मुख गर्नेछ । आफू, लगानीकर्ता, राम्रा कर्मचारी, लोयल ग्राहकबीचको घनिष्ठता, धैर्यता र ब्यवहार नै ग्यास स्टेशनको सुन्दर विहानी हो।
श्रोत/ विशेष धन्यवाद, सानुबाबु सिलवाल Facebook